Sanado badan dadka isticmaala Mac raadinaynay tutorial ugu fiican si loo hubiyo in isticmaalka haddii USB drive aan la sahmin oo kaliya laakiin waxaa sidoo kale lagu sameeyey hab ugu fiican si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka yihiin fuliyay on OS this xiddig. Waxaa sidoo kale in la xuso in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waa kuwa in la hubiyo in user ka dhigaysa isticmaalka ugu wanaagsan ee qalabka nidaamka iyo tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in baahida iyo baahida Mac ah users la buuxiyo iyo wacyi user guud loo abuuray.
Waxaa jira tiro fara badan oo ah talooyin heerka horay loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka ay timaado isticmaalka USB on Mac laakiin tutorial this hubiyo in ugu sareeya 7 Talooyin in la Mac qaban dhigi doonaa isticmaalka USB ayaa laga wada hadlaa iyo sidoo kale waa in ay noqon mid ka mid ah oo la hubiyo in tababarka heerka aasaasiga ah waxaa la siiyaa si user ah oo ay ka helaan natiijada ugu fiican ee si isticmaalka guud ee USB ku Mac waxaa loo sameeyey si fudud.
1. Connect flash drive in MAC
Waa talaabada ugu aasaasiga ah in user a raaci karaan arrintan la xiriira. Xiriirka USB si Mac waa habka ugu fudud oo loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada tahay in arrintan la xiriira, taas oo sidoo kale wuxuu iyaga u hoggaamin aqoonsi ka mid ah qalabka taas oo markaas loo isticmaali karo kala iibsiga file iyo qaybsiga dhigi lahaa. Dekedaha USB waxaa jira buug Mac iyo sidoo iyo user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa loo bixiyo sida sawirka hoose ka dhigo:
2. virus Scan in flash drive ee Mac
Sidoo kale waa mid ka mid ah hawlaha ay tahay in si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u drive USB oo uu soo geliyo si nidaamka marna ay saameeyeen iyo xogta USB drive waxaa sidoo kale la ilaaliyey sidan ugu wanaagsan waa in la sameeyaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah waxyaabaha tahay waxaa loo isticmaalaa. Qalab USB waa in ay xaq u riixi mar ClamXav ayaa lagu rakibay taas oo ah barnaamijka ugu wanaagsan ee software-adda. Interface ayaa ka muuqan doontaa meesha ikhtiyaarka scan ay tahay in la soo xulay in ay dhamayso:
3. Open flash drive ee Mac
Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid ka mid ah habka ugu fudud oo loo baahan yahay si loo hubiyo in la sameeyo in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah ku qaadeen karin. Waxaa sidoo kale in la xuso in a user arrintan la xiriira waa in marka hore laga baarayo drvie wanaag si ay furin iyo fayrusyada marnaba shuqulka nidaamka xun ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in finder ee uu soo dhisay gudahood Mac uu awood u leeyahay in la furo drives USB ah. Gudigu waxay ku tagay waxay muujinaysaa dhan drives xiran oo mar mid la doonayo ayaa la riixi ku jira waxaa lagu muujiyey in guddi midig,
4. file Transfer ka MAC in flash drive
Waxaa mar kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka muuqaalada tahay ogolaada in user ay u isticmaalaan baabuur hab dhaqanka ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in files in lagu wareejiyo drive waxaa la marsiiyey u fayrusyada iyo haddii ay jiraan wax ay tahay in la saaro dhaqso badan si aad u hubiso in drive aan la saameeyeen . Drive ayaa sida ugu dhakhsaha badan ku xiran muuqataa gal desktop ee Mac ugu magaca flash iyo faylasha lagu jiido karaa dhammayn nidaamka gebi ahaanba:
5. Samaynta raad raac ah oo aad flash drive ee Mac
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ee geedi socodka tahay in si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego keydinta macluumaadka iyo gurmad oo markaas la raadsan karaa iyadoo aysan arrinta iyo dhibaato Waa in la fuliyo ah. Marka tan la eego, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in xaq guji drive in uu u muuqday gal desktop-ka si ay u hubiyaan in fursad u nuqul waxaa loo doortay in ay gurmad xogta buuxda:
6. formatting flash drive ee Mac
a. The Lauch + Spacebar waa in la sii adkeeyey ka dibna codsiga eraygii waa in lagu qoraa makiinad si loo hubiyo in folder codsiyada waa la heli. Oo halkaasaannu ka user ay u baahan tahay in ay doortaan utility disk:
b. Drive ayaa USB waa inuu kan la formatted waa in la soo xulay gal bidix si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo button masixi yahay markaas in la adkeeyey,
c. Button masixi waxaa ka dibna mar kale in la sii adkeeyey sida conformation dhammayn nidaamka Dhameystiran:
7. Ladnaansho files ka flash drive ee Mac
By isticmaalaya Wondershare Data Recovery u Mac-socodka sidoo kale waa mid aad u fudud in la doorto oo ay raacaan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in geeddi-socodka uu soo hoos ku xusan waa in la raaco si aad u hesho natiijooyinka hab xiddig:
a. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html#tab_01 barnaamijka waa in lagala soo bixi oo ay maamulaan,
b. The kabashada file laga badiyay waxaa ka dibna in la riixi si aad u hesho interface soo socda, halkan user ay u baahan tahay in ay doortaan drive si loo hubiyo in tabinta raadinta waxaa cidhiidhi ah oo badhanka scan sare ee daaqadaha waa ka dibna in la sii adkeeyey si aad u hubiso in hawsha la bilaabin habka ugu fiican.
c. Marka faylasha lagu soo baxey user waa in la hubiyo in files ugu fiican ayaa looga baahan yahay in lagu doorto sameeyo oo la xidhiidha ka soo kabsado button la isku soo riixayo dhammayn nidaamka:
> Resource > Mac > 7 Talooyinka la isticmaalayo flash drive ee Mac